भारत कस्तो छिमेकी हो ? - Online Majdoor
मजदुर दैनिक सम्पादकीय
निःसन्देह भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र हो । नेपाल र भारतबीच करिब १७ सय ५१ किलोमिटर लामो सीमा छ । गत वर्षको नोभेम्बरमा भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई मिचेर नयाँ नक्सा जारी गरेर सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालसँग सीमा विवाद चलिरहेको छ । तर, बुधबार (७ जेठ, २०७७) मा नेपालले यी तीनै क्षेत्र समेटेको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो, जसलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ । गत नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको नक्सा नेपालले पनि स्वीकार गरेको छैन । कालापानी क्षेत्रमा भारतले सन् १९६२ देखि नै आफ्ना सैनिक राखेको छ । नेपालले पटक–पटक यसको विरोध गरेको भए पनि भारतले हालसम्म सेना हटाउनुको साटो नेपाली भूमिलाई नै आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । भारतसँग नेपालको पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न ५४ स्थानमा सीमा विवाद छ । तर, सशस्त्र प्रहरी बलले गत वर्ष गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार भारतले नेपालका १५ जिल्लाका ९६१ स्थानमा सीमा मिचेको छ । सो विवरणअनुसार इलाममा १८, झापामा ३५, मोरङमा १९, सुनसरीमा ३९, सप्तरीमा २१, सिरहामा ६३, धनुषामा ६५, महोत्तरीमा ४५ र सर्लाहीमा १ सय ५१ स्थानमा सीमा विवाद छ । यस्तै, रौतहटमा ८, बारामा १४ स्थान र सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लामा ४ सय ५४ स्थानमा सीमा विवाद देखिएको छ । कैलालीमा २ स्थान र कञ्चनपुरमा २७ स्थानमा विवाद रहेको सशस्त्रले बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ ।
सो विवरण बुझाउँदा सशस्त्र प्रहरीले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको पर्याप्त प्रमाण रहे पनि भारतले अतिक्रमण गरेको र नेपालका लागि विशेष भूमि भएकोले विशेष सुरक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यस्तै, लिम्पियाधुरामा बीओपी राख्ने र लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुराको सुरक्षा गर्ने उल्लेख थियो । जुन स्थानमा अहिले भारतसँग सीमा विवाद उत्कर्षमा छ ।
दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ होइन । तर, पछिल्लोपटक देखिएको विवादको सुरूवातकर्ता भने नेपाल नभएर भारत नै हो । भारतले अत्याचार नगर्दासम्म नेपालीहरू नेपाल र अङ्ग्रेज शासित भारतबीच भएको सुगौली सन्धिले रोपेको खिल सहेरै बसेका थिए । १६ कार्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूमिसमेत राखेर भारतको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध हुनथाल्यो । किनभने उनीहरूको आठौँ संस्करणको राजनीतिक नक्सामा भारत आफैँले स्वीकारेको नेपाली नक्साभित्रकै भू–भाग आफ्नोतिर पारेको थियो । सुगौली सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरेको काली (महाकाली) नदी हटाउन तीन हप्ताभित्रै नवौँ संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । जबकि नेपाली नक्साभित्रकै कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले सीमा समस्या समाधानको लागि वार्ता गर्न आग्रह गरेर दुई पटक पठाएको कूटनीतिक नोटलाई भारतले कुनै वास्तै गरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतको रूपमा भारत पठाउन लागेको तर उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । हामीले घनिष्ठ छिमेकी मित्र राष्ट्र भन्दै आएको देशका शासकहरूको सोच र व्यवहार भने त्यस अनुकूल छैन । भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोत, साधन र बजारमाथि सधैँ कुदृष्टि राखिरहेको छ । त्यसैले नेपाली जनता प्रश्न उठाउन बाध्य छन् – भारत कस्तो छिमेकी हो ?
One response to “भारत कस्तो छिमेकी हो ?”
Can anyone translate this article into engish and publish it again. Indian people are asking about facts and they don’t know english. This article will beareply to their questions.